မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထိုအ ATV vin စကားဝှက်ကိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြ
မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ vin အရေအတွက်ကိုဝှက်ရန်သင့်အားပထမဦးဆုံး vin number ကိုနေရာချထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. အဆိုပါ vin number ကိုတစုံတယောက်သောသူသည်အထူးသဖြင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှထူးခြားသည်နှင့်မျှမတို့နှစ်ဦးကိုအတိအကျတူညီနေကြသည်.
ဒီနေရာမှာ vin နံပါတ်စစ်ဆေး
မည်သည့်စက်ဘီးသို့မဟုတ် ATV ပေါ်တွင် vin အရေအတွက်ကို decoding by, သင်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်အကြောင်းအများကြီးသင်ယူနိုင်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောသူကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်အဖြစ်. ဒါတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့် vin ပန်းကန်ပေါ်ပထမသုံးအက္ခရာနဲ့နံပါတ်တွေဟာ.
အဋ္ဌမဂဏန်းကနေတဆင့်ကစတုတ္ထထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ခန္ဓာကိုစတိုင်နှင့်အင်ဂျင်အမျိုးအစားအဖြစ်ဆိုင်ကယ်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုရည်ညွှန်းသည်. အများစုဟာစကားဝှက်ကိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြဤအချက်အလက်ရှိနိုင်ရှိသည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်တို့ရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ထုတ်လုပ်သူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်.
နဝမဂဏန်းကို vin စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အာမခံချက်များအတွက်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်.
ဆယ်ဘို့တဘို့ဂဏန်းယာဉ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကွောငျးထိုနှစ်တွင်အဘို့ဖြစ်၏. Y ကမှတဆင့်တစ်ကားများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်ထံမှနှစ်ပေါင်းညွှန်ပြ 1980 ရန် 2000. အထဲက 2001 ရန် 2009 ဂဏန်းဖြစ်လိမ့်မည် 1 မှတဆင့်9အဲဒီနှစ်မှလုိုက်လျောညီထွေ. အထဲက 2010 သူတို့အထဲကအဖြစ်နောက်တဖန်အအက္ခရာစဉ်စတင်ရန် 1980 ရန် 2000.
အကောင်းဆုံးကို Yamaha ၏တစျရှာတွေ့မှ, Kawasaki, Suzuki သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် Harley Davidson vin စကားဝှက်ကိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှဖမ်းယူနားဆင်နေဖို့.
မော်တော်ဆိုင်ကယ် vin စစ်ဆေးနှင့် ATV vin စစ်ဆေးခြင်း